Ancelotti oo sheegay furaha ay Real Madrid kaga guuleysan karto Barcelona kulanka El Clasico – Gool FM
(Madrid) 22 Okt 2021. Tababaraha kooxda Real Madrid Carlo Ancelotti ayaa muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay inuu ku wajaho Barcelona kulanka El Clasico ee La Liga Axadda soo aadan ka dhici doona garoonka Camp Nou.
Real Madrid ayaa ku jirta kaalinta labaad ee kala sarreynta horyaalka Spain iyadoo leh 17 dhibcood, halka Barcelona ay ku jirto kaalinta toddobaad ee kala sarreynta iyadoo leh 15 dhibcood.
Haddaba sida uu daabacay wargeyska “Marca” ee dalka Spain, tababaraha reer Talyaani ee Carlo Ancelotti ayaa kahor kulanka la wada sugayo ee El Clasico sheegay:
“Kulammada Clasico waa kuwo gaar ah, waddan walba waxaa ka jira laba ciyaarood oo gaar ah, sida Inter iyo Milan, Chelsea iyo Tottenham, iyo Bayern iyo Dortmund.”
“Kani waa kulan gaar ah oo Spain ah, El Clasico-na waa kulanka ugu muhiimsan taageerayaasha, kani ma aha kulan caadi ah, habka diyaarintaydana waxay ku xiran tahay xasiloonida iyo feeljignaanta ugu badan.”
“Inaan si fiican u difaacno ayaa fure u ah wax walba, dhammaan kulamadii aan shabaqeena ilaashanay waxay ku dhammaadeen guulihii aan gaaray, dhibaatadu ma ahan inaanu gool dhalin, balse waa in goolal lagaa dhalinin.”
“Si wanaagsan ayaan u shaqeyneynaa, si fiican ayaan uga soo laabanay kulankii Shakhtar, waxaana qabaa in Carvajal iyo Hazard ay soo laaban doonaan, waxaan heysanaa waqti aan si wanaagsan ugu diyaar garoobno kulanka El Clasico, jir ahaan iyo farsamo ahaanba.”